Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Miyaad ku dhiiran kartaa inaad ku iibsato qasabad saxanka musqusha wax ka yar $ 20?
2020 / 10 / 20 QoondayntaTilmaamaha qasabada 4062 0
Qasabadaha qasabaddu dhammaantood waxay u egyihiin si isku mid ah, laakiin farqiga ayaa noqon kara mid weyn! Qiimo aad u jaban ayaa qasab ah! Wali miyaad ku dhiirrataa inaad iibsato?
Astaamaha qasabadda ayaa sida caadiga ah ka hooseeya $ 20
Daawaha Zinc oo isu dhigaya sida dahaarka naxaasta
Qasabadaha sida ay u kala yihiin alaab kala duwan waxaa loo qaybin karaa birta birta ah, birta la tuuray, balaastigga, daawaha naxaasta ah, zinc alloy, qalabka isku dhafka polymer, iwm.
Ilaha warshadaha, suuqa hoose ee dhamaadka, qayb ka mid ah soo saarayaasha raadinta dhimista kharashka, isticmaalka qalabka naxaasta ah ee qiimaha kaliya 1/3 ee maaddada aaladda zinc, maxaa yeelay zinc laftiisa sidoo kale waa cufnaan ballaaran, badeecada lafteedu sidoo kale waxay leedahay lakabka electroplating, macaamiisha caadiga ah kama dareemi karaan culeyska, muuqaalka alaabta noocaas ah iyo farqiga caadiga ah ee u dhexeeya qasabada naxaasta dahaarka ah. Si kastaba ha noqotee, qasabadaha zinc alloy waxay khatar weyn u yihiin caafimaadka macaamiisha, maadaama qaadashada zinc ee xad-dhaafka ahi ay horjoogsan karto nuugista jirka ee birta iyo naxaasta, taasoo keenta dhiig yaraanta birta.
Kaydadka birta birta waxaa loo yaqaan 'kaydadka dhoobada.
Kaydadka qasabada badanaa waa gulufyada kubbadda birta iyo kaydadka dhoobada ah. Kaydadka kubbadda birta ah waxay leedahay iska caabin cadaadis wanaagsan, laakiin giraanta daboolka caagga ah ee ka ciyaara doorka xiritaanka way fududahay in la xidho oo dhakhso loo gaboobo. Kaydadka dhoobada ayaa ah mid aad ugu adkeysi badan kuleylka una adkeysta xirashada, waxayna leedahay waxqabad wanaagsan oo wax lagu xiro, waxay dareemeysaa raaxo badan, jilicsan, oo furan, si dhakhso leh u xir.
Sidaa darteed, warshaddu waxay tiri xudunta dhoobada dhoobada ka sameysan birta birta ee birta birta waxay u baahan tahay tiknoolajiyad sare iyo kharash, macaamiishana ma kala sooci karaan isha qaawan, sidaas darteed waxay noqotay meel faa'iido lagu kasbado ee soo saarayaasha damiir laawayaasha ah. Macaamiisha ayaa dooran kara inay si fudud ugu xukumaan spool xumaanta ama samaanta iyadoo la raacayo dareenka marka la wareejinayo gacanta. Guud ahaan marka la hadlayo, macaamiisha ayaa kor u qaadaya gacanka, hoos, bidix iyo midig, haddii dareenka fudeydku, wax carqalad ah lahayn, markaa daboolka waalka ayaa ka fiican.
Sheegashada inay ka madax banaan tahay hogaanka ama hogaaminta hoose
Booqasho suuqa qasabada ayaa laga heli karaa, hada ganacsiga qasabada kaliya ma xayaysiinayo sheyga ma daadanayo, ma daxalaysto, waxaa jira kaar badan oo "ka madax banaan" ledhka. Qasabadaha dhab ahaantii waxay ku guuleystaan ​​"hogaan la'aan"?
Ilaha warshadaha, sida ku cad tiknoolajiyada wax soo saarka hadda, waxay sameyn karaan oo kaliya qasabada "leedh yar", waa wax aan macquul aheyn in la sameeyo "hogaamin la'aan". Sidaa darteed, haddii ganacsigu sheegto in badeecaddu ka madax bannaan tahay hoggaanka, ama la yiraahdo hoggaanka hooseeya, laakiin dukumiintiyada caadiga ah ee u dhigma ee ku taxan, alaabooyinka noocaas ah, macaamiisha waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan
Ha u maleynin in qasabadahaan raqiiska ah, ee tayadoodu hooseyso aysan saameyn weyn laheyn; gurigaaga way burburin karaan!
-Mudane. Fang, oo ku nool deegaanka Kunlun, ayaa ku soo warramay in maadaama oo aysan muddo dheer ku noolayn gurigooda, aysan ka warqabin tuubada jaban taasna ay keentay in guryahoodii iyo guryihii deriskooda hoose ay daadad galeen, taas oo sababtay dhaawac aad u badan.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo badeecado qasabadaha laga heli karo oo laga helo suuqa, tayaduna way kala duwan tahay. Haddii aad iibsato qasabad tayo liidata, ma aha oo kaliya waqti qaadasho iyo qaali, laakiin xitaa waxay khatar gelin kartaa caafimaadka qoyskaaga.
Sida loo xusho qasabad wanaagsan, fadlan xusuusnow afarta qodob ee soo socda.
Marka laga hadlayo maaddada qasabada, xusuusnow qaaciddada soo socota ▼
Haddii aad wali isticmaaleyso qasabado ka sameysan caag / zinc / iron cast, markaa waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad isla markiiba bedesho! Muddo dheer isticmaalka saddexdaan shey waxay waxyeello u geysan karaan jirka aadanaha.
▲ Tubooyinka ka samaysan caag iyo zinc alloy
Qasabada balaastigga way fududahay in waxyeello soo gaarto, nolosha ugu adeegga yar; zinc alloy taabashada biyaha ee muddada-dheer way fududahay in oksijiin lagu sii daayo, sii deynta zinc, rasaasta iyo biraha kale ee culus ee waxyeellada u leh jirka aadanaha; Waxyaabaha birta lagu tuuro waa u fududahay in miridhku ku fududaado, daadinta iyo khataraha caafimaad.
Tuubbooyinka laga sameeyo birta birtu waxay u nugul yihiin miridhku.
Birta aan birta ahayn iyo qasabadaha dhoobada ayaan khatar u ahayn caafimaadka, laakiin bisayl la'aanta habka wax soo saar ee labada qalab, kharashyada wax soo saarka, iyo u nuglaanta birta birta ah, dhoobada jilicsan, labaduba ma ahan xulashada ugu fiican ee qasabadaha guryaha.
Taa bedelkeeda, naxaasta ma aha oo kaliya habka wax soo saarka ayaa bislaaday, oo lagu daray ma sahlana in la xoqo, wuxuu leeyahay saameyn aad u wanaagsan oo bakteeriyada ah, wuxuu aad ugu habboon yahay qasabadaha la sameeyay. Tuubbooyinka naxaasku sidoo kale waa kuwo caan ka ah suuqa maanta.
Tayada spool waxay saameyn ku yeelataa saameynta biyo-keydinta tuubada. Suuqa waxaa ku yaal laba nooc oo qasabadaha qasabadda ah: dhoobada dhoobada iyo biibitada kubbadda birta ah.
Waxaa lagugula talinayaa inaad iibsato xudunta dhoobada dhoobada. Kaliya maaha kuleylka u adkaysata iyo xirnaanshaha u adkaysta, nolosha muddada dheer, waxay si fiican uga hortagi kartaa daadashada biyaha daadanaya. Kaydadka kubbadda birta sidoo kale way ku wanaagsan tahay dhammaan dhinacyada waxqabadka, laakiin marka la barbar dhigo kaydadka dhoobada ah, isticmaalka wakhti ka gaaban, way fududahay in la keeno dheecaan daadanaya.
Bilowga qasabad wanaagsan ayaa hubin doonta in biyuhu aysan kala firidhsan, taasoo ka dhigaysa biyaha qulqulka socodka kuwo deggan oo raaxo leh, iyo sidoo kale keydinta biyaha.
Kahor iibsiga qasabada, waxaa ugu wanaagsan in iibiyuhu sameeyo tijaabo biyo si uu ula kulmo raaxada iyo qubeyska socodka socodka biyaha. Markasta oo xumbooyin badan oo ku jira qulqulka biyaha, ay sii fiicnaanayaan tayada xumbada oo ay u fiicnaato howlaha badbaadinta biyaha.
Bub Xumbo badan oo qulqulka biyaha ka mid ah waxay ka dhigan tahay tayo ka sii wanaagsan ee xumbada.
Ma ogaan doontid, laakiin qasabadda ayaa sidoo kale xubin ka ah "Bulshada Muuqaalka". Kadib shiidida iyo nadiifinta nidaamka, tubooyinka ayaa lagu daboolaa lakab ah nikkel ama chromium si looga hortago qiiqa. Nikkel ama chromium waxay u adkaysataa aashitada hydrochloric acid waxayna ka ilaalisaa tuubada inay daxalato muddada dheer.
Qasabadaha oo aan si fiican u dahaadhnayn ayaa u nugul daxalka.
Markaad wax iibsaneysid, tubbada tubbada dhig meel iftiinkiisu sareeyo oo fiiri. Ma jiraan baro oksijiin oo dusha qasabadda ah, godad ma leh, ma daadanayo dahaadhka, iyo midabka si siman ayaa loo qaybiyey waa qasabad wanaagsan.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa qaab fudud: ku riix qasabadda fartaada, faraha oo si dhakhso leh u kala firdhi kara sidoo kale waa qasabad wanaagsan.
Hore:: Habab fudud oo Dayactir loogu sameeyo tuubada daadata ee 5 Tallaabo oo Fudud Next: Sidee loo doortaa oo loo iibsadaa tuubada biyaha kulul ee degdega ah?